Qaabka atomiga ee Rutherford. Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato | Saadaasha Shabakadda
Isbarasho kadib Qaabka atomiga Thomson, taas oo tixgelisay elektaroonikada inay ku jiraan dhexdhexaad dhexdhexaad ah, moodal aad u horumarsan oo loo yaqaan Model atomiga Rutherford. Saynisyahankii mas'uulka ka ahaa horumarkan cusub ee sayniska wuxuu ahaa Ernest Rutherford. Wuxuu dhashay Ogosto 20, 1871 wuxuuna dhintay Oktoobar 19, 1937. Intii uu noolaa wuxuu wax weyn ku soo kordhiyay cilmiga kimistariga iyo guud ahaan dunida sayniska.
Sidaa darteed, waxaan u hibeyn doonnaa qodobkaan si aan kuugu sheegno wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato nooca atomiga ee Rutherford.
1 Tijaabada Caleenta Dahabka ah
2 Gabagabada tijaabada Dahabka Dahabka ah
3 Qaabka atomiga ee Rutherford
4 Oggolaanshaha iyo xaddidaadda nooca atomiga ee Rutherford
Tijaabada Caleenta Dahabka ah
Qaabdhismeedkii hore ee thomson wuxuu sheegay in elektarooniyuhu ay kujiraan dhexdhexaad dhexdhexaad ah. Sannadkii 1909 Ernest Rutherford, oo ay weheliyeen laba caawiye oo lagu kala magacaabo Geiger iyo Marsden, waxay sameeyeen daraasad loo yaqaan tijaabada Dahabka Dahabka ah halkaas oo ay ku xaqiijin karaan Thomson caan ku ahaa "sabiib pudding" wuu khaldamay. Taasina waa in tijaabadan cusubi ay awood u yeelatay inay muujiso in atomku leeyahay qaab dhismeed leh kharash fiican oo togan. Tijaabadan ama waxay gacan ka geysan kartaa dib-u-soo-nooleynta gabagabada qaar oo ku dhammaaday in loo soo bandhigo sidii qaabkii atomiga ee Rutherford ee 1911.
Tijaabada loo yaqaan Caleenta Dahabka ma ahayn mid gaar ah laakiin waxaa la qaaday intii u dhaxeysay 1909 iyo 1913. Tan darteed, waa la adeegsaday shaybaarada fiisigiska ee Jaamacadda Manchester. Tijaabooyinkani waxay ahaayeen muhiimad weyn tan iyo markii gabagabada cusub laga soo saari karo natiijooyinkooda taasoo horseeday moodal atomic kacaan ah.
Tijaabadani waxay ka koobnayd kuwan soo socda: xaashi khafiif ah oo dahab ah oo kaliya 100nm qaro weyn ayay ahayd in lagu duqeeyo tiro badan oo ah walxaha alfa. Qaybaha alfa waxay ahaayeen iyo ion. Taasi waa, atamyo aan lahayn elektaroonno, sidaa darteed waxay lahaayeen oo keliya borotoonno iyo naadir-wade. Haysashada naadir iyo borotoonno, isku darka guud ee atamka wuu fiicnaa. Tijaabadani waxay inta badan laheyd ujeedada xaqiijinta in qaabka Thomson uu sax ahaa. Haddii qaabkani sax ahaa, qaybaha alfa waxay ahayd inay dhex maraan atamka dahabka ee safka toosan.
Si loo barto leexashada ay sababeen walxaha alfa, shaandhada zinc sulfide fluorescent waa in la dhigaa hareeraha biraha dahabka wanaagsan. Natiijada tijaabadan ayaa ah inay suurtagal noqotay in la fiirsado in qaybo ka mid ahi ay awood u yeesheen inay ka gudbaan atomyada dahabka ah ee xaashida oo ku jira xariiq toosan. Si kastaba ha noqotee, qaar ka mid ah qaybaha alfa ayaa loo leexiyay jihooyin aan kala sooc lahayn.
Gabagabada tijaabada Dahabka Dahabka ah
Marka la eego xaqiiqdaas, suurtagal ma ahayn in la caddeeyo waxa loo tixgeliyey tusaalihii hore ee atomiga. Waana in moodelladaas atomku tilmaameen in khidmadda togan loo qaybiyay si isku mid ah atamka taasna ay fududaynayso in laga gudbo maaddaama oo aanay khidmaddiisu sidaa u sii xoog badnayn meel cayiman.
Natiijooyinka tijaabadan Dahabka ah ayaa gebi ahaanba lama filaan ah. Tani waxay ka dhigtay Rutherford inuu u maleeyo in atamku lahaa xarun leh lacag fiican oo togan oo la sameeyay markay ahayd qayb alfa ah isku day inaad gudbiso waxaa diiday dhismaha dhexe. Si loo sameeyo ilo lagu kalsoonaan karo, jajabyada waxaa loo tixgeliyey tiro ahaan kuwa ka muuqanaya iyo kuwa aan ka muuqan. Thanks to xulitaankan walxaha, waxaa suurtagal ahayd in la go'aamiyo cabbirka bu'da marka la barbardhigo wareegga elektaroonigga ku hareeraysan. Sidoo kale waa la soo gabagabeyn karaa in inta badan atomku faaruq yahay.
Waa la arki karay, qaar ka mid ah qaybaha alfa waxaa leexday biraha dahabiga ah. Qaarkood waxay ka leexdeen kaliya xaglo aad u yar. Tani waxay gacan ka gaysatay in la soo gabagabeeyo in lacagta saxda ah ee atamka aan si siman loo qaybin. Taasi waa, lacagta saxda ah waxay ku taalaa atamka qaab isku urursan oo muggiisu aad u yar yahay.
In yar oo walxaha alfa ka mid ah ayaa dib u soo laabtay. Weecasho Tani waxay muujineysaa sida soo socota ayaa sheegay Qurub ay dib u soo laaban karaan. Waad ku mahadsan tahay dhammaan tixgelintaas cusub, qaabka atomiga ee Rutherford waxaa lagu dhisi karaa fikrado cusub.
Waxaan baran doonnaa maxay yihiin mabaadi'da nooca atomiga ee Rutherford:
Qaybaha ku leh xukun qumman gudaha waxaa loo habeeyay si aad u yar haddii aan isbarbar dhigno wadarta guud ee atom la sheegay.
Ku dhowaad dhammaan culeyska atomku leeyahay ayaa ku jira muggaas yar ee la sheegay. Isugeyntaas gudaha ah waxaa loo yaqaan 'nucleus'.
Elektaroonigga oo leh dacwado taban waxaa laga helaa meertada agagaarka bu'da.
Elektaroonikyadu waxay ku wareegayaan xawaare sare markay joogaan hareeraha xudunta waxayna ku sameeyaan wadooyin wareegsan. Jidadkaas waxaa loo yaqaan orbits. Mar dambe ayaan waxaa loo yaqaan orbitals.
Labadaba elektarooniga ah ee si xun loo eedeeyey iyo xudunta atomka wanaagsan ayaa laftiisu had iyo jeer la wada haystaa iyada oo ay ugu mahadcelinayaan xoogga soo jiidashada korantada.
Oggolaanshaha iyo xaddidaadda nooca atomiga ee Rutherford
Sidii la filayay, qaabkan cusub wuxuu ku tala galay panorama cusub oo atomka dunida cilmiga ah. Thanks to moodelkan atomiga, saynisyahano badan oo dambe ayaa daraasayn kara oo go aansan kara tirada elektaroonigyada uu qayb kasta oo ka mid ah miiska xilliyeedku leeyahay. Intaa waxaa dheer, helitaanno cusub ayaa la sameyn karaa kuwaas oo gacan ka geysanaya in sida ugu fudud loogu sharaxo shaqada aatomka.
Si kastaba ha noqotee, qaabkani wuxuu kaloo leeyahay xoogaa xaddidaad iyo cilado ah. In kasta oo ay ahayd horumar laga gaadhay adduunyada cilmiga fiisigiska, haddana iyagu ma ahayn kuwo dhammaystiran ama moodel dhammaystiran leh. Taasina waa tan marka loo eego sharciyada Newton iyo dhinac muhiim ah oo ka mid ah sharciyada Maxwell, qaabkani ma sharixi karin waxyaabaha qaarkood:
Ma uusan sharixi karin sida eedeymaha taban ay u awoodaan inay iskula qabsadaan nukleus. Marka loo eego tibia elektarooniga ah, eedeymaha wanaagsan waa inay iska celiyaan midba midka kale.
Is burinta kale waxay ahayd dhanka shuruucda aasaasiga ah ee korontada. Haddii elektiroonigga oo leh qaddarin qumman loo tixgeliyo inuu wareegayo xudunta, waa inay soo saaraan shucaaca elektromagnetic. Markaad sii deyneyso shucaacan, tamar ayaa loo cunay si elektarooniggu ugu burburo bu'da. Sidaa darteed, qaabka atomiga qunyar-socodka ahi ma sharxi karo xasilloonida atamka.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad wax badan kaga baran karto qaabka atomiga ee Rutherford.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Ciencia » Qaabka atomiga ee Rutherford